Ama-Bookies ahamba phambili - Ukukuthola Ababhuki Abaphezulu Abaku-inthanethi
Amasayithi wokubheja aku-inthanethi – Find the Best Bookmakers for 2022
Siyakwamukela kuma-Best Bookies, ukuphela kokuma kunoma ngubani ofuna ababhuki abahamba phambili online. Sinikeza ngokuthembeka, ukubuyekezwa okungachemile futhi okuningiliziwe kwama-bookies amaningi aku-inthanethi, ukukusiza uthole okulungele kakhulu izidingo zakho. Ithimba lethu linenqwaba yemidlalo yokubheja kwezemidlalo, njengabo bobabili ababhejayo futhi njengochwepheshe bemboni, futhi sisebenzisa konke ukukuhlinzeka ngolwazi olungcono kakhulu.
Ungakhathazeki uma umusha ngokuphelele emhlabeni wababhuki abaku-inthanethi, sizokufundisa konke odinga ukukwazi. Esizeni sethu, uzothola incazelo yokuthi yini kanye kanye eyenza ibhuki ibe enye yezinto ezinhle kakhulu ukuze ungachithi isikhathi ezindaweni ezingekho ezingeni. I-intanethi iyikhaya lenqwaba yababhuki, kodwa eBest Bookies, siwenzile wonke umsebenzi onzima wokuhlelela okuhle kokubi, ukonga isikhathi nomzamo, futhi sikusize uqalise ukubeka ukubheja nganoma isiphi isikhathi.
Izindawo ezihamba phambili zokubheja zango-2021
100% kuze kufike ku-€122
Indlela Esibukeza Ngayo Abhuki Abakwa-inthanethi Ukukulethela Ababhuki Abahle Kakhulu
Ngaphambi kokuncoma wena ngubhuki, sikubeka enqubweni yokuhlola eningiliziwe. Ngaleyo ndlela siyakwazi ukukulethela okungcono kakhulu kubo futhi sikhiphe lezo ezingaphansi. Kunezigaba eziningana zalokhu futhi kuklanyelwe ukuhlola zonke izici zebhuki eku-inthanethi, kusukela kwinqubo yokubhalisa kuye ebangeni lamathuba okubheja, amabhonasi, futhi nokuningi.
Lapho ubeka ukubheja kuma-bookies aku-inthanethi, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ungasithemba isayithi. Kuneziphathimandla eziningi zokugembula ezilawula ababhuki abaku-inthanethi, njengeKhomishini Yezokugembula yase-United Kingdom, iMalta Gaming Authority kanye noHulumeni waseCuracao. Sizoncoma kuphela ubhuki uma ephethe ilayisense evela kuziphathimandla ezihlonishwayo. Ngale ndlela kuphela ungaqiniseka ukuthi imali yakho nobumfihlo bakho kuzovikelwa nokuthi iwebhusayithi ayisiwona umkhonyovu.
Izimakethe Zezemidlalo Nokubheja
Uma sesinesiqiniseko sokuthi ibhuki ivumelekile, sizoqala ukubheka uhla lwezemidlalo oluzihlanganisayo kanye nezimakethe ezinikezwayo; phela, akukho phuzu lokuncoma ubhuki ongahlinzeki ngamathuba amaningi okubheja. Ngenkathi cishe bonke ababhuki be-inthanethi bezokhuluma ngemidlalo emikhulu, njengebhola likanobhutshuzwayo, i-basketball, ihoki, njalo njalo, ababhuki abaningi badlulela ngalé kwalokhu futhi banikeza izimakethe zokubheja emidlalweni engathandwa kangako, njenge-badminton, ibhola lesandla, snooker, nezinye eziningi.
Akuyona nje ibanga lezemidlalo elibalulekile, kodwa futhi nobubanzi bezimakethe. Bonke ababhuki bazohlinzeka ngezimakethe eziyisisekelo, njenge-moneyline, Ingqikithi nokusabalalisa ukubheja. Noma kunjalo, sibheka ababhuki abanikeza okungaphezulu kakhulu kwalokhu, enikeza amakhasimende amandla okubheja kunoma yisiphi isici somcimbi wezemidlalo afuna ukuwenza. Sithanda nokubona ukukhetha okuhle ekubhejeni kwesiphakamiso, izimakethe eziqondile, izimakethe zemidlalo nezimakethe ezingaphakathi, ukuqinisekisa ukuthi unezimo eziningi zokubheja njengoba udinga.
Ukubheja Amabhonasi Nokukhushulwa
Bonke ababhuki abahle bazonikela ngamabhonasi amaningi nezenyuso kumakhasimende abo; kodwa, akuwona wonke amabhonasi enziwa ngokulingana. Sibheka wonke amabhonasi atholakalayo ngokuningiliziwe, ukuqala nge bookies bhalisa misebenzi. Akunakugwenywa ukuthi wonke amabhonasi eza nemigomo nemibandela, yingakho siwahlola ngokucophelela ukuqinisekisa ukuthi alungile. Akunasizathu sokufuna ibhonasi kuphela lapho uthola ukuthi awusoze wahlangabezana nezimfuneko zokubheja ngakho-ke awusoze wakwazi ukuhoxisa ama-winnings akho.
Lokhu kuyiqiniso kuwo wonke amabhonasi, hhayi nje ukubhukha kokubhukha kuphela. Kungaba khona ukunikezwa kwe-accumulator ukubheja, ukubuyiselwa kwemali, izikimu zokwethembeka, njalo njalo. Lapho ubukeza ubhuki, sizibuka zonke ngokuningiliziwe ukuqinisekisa ukuthi zimelela inani elihle lemali futhi zinikeza izinzuzo ezithile zangempela.
Ukubheja Kwamaselula nesipiliyoni seKhasimende
Kulula ukunganaki ukuthi ukwakhiwa kwewebhusayithi kubaluleke kangakanani lapho uzama ukuthola ababhuki abahamba phambili. Uma ibhuki ihlinzeka ngezinkulungwane zezimakethe kumakhulu ezemidlalo, lapho-ke kubalulekile ukuthi isiza sakhiwe kahle futhi kulula ukuzulazula. Lokhu kusebenza kuzo zonke izici zokusebenzisa ubhuki, kusukela lapho ujoyina. Kungakho qala ngokubuyekeza inqubo yokubhalisa; siqinisekisa ukuthi iqondile nokuthi obhukha imali ubuza kuphela inani elifanele lemininingwane.
Namuhla, abathengi abaningi bezemidlalo bazofuna ukubheja kumadivayisi wabo weselula kalula. Kuyasiza kakhulu ezimeni ezahlukahlukene, ikakhulukazi lapho ubuka umdlalo bukhoma. Sibheka ngokucophelela izinhlelo zokusebenza zokubhuka kanye namawebhusayithi weselula. Ngaphandle kokubheka ukuthi ukubheja kweselula kungenzeka, sifuna futhi ukubona ukuthi izinhlelo zokusebenza zeselula / amawebhusayithi aklanywe kahle, nikeza uhla oluphelele lokusebenza, futhi uvumele abadlali ukubeka kubhejwa ekuhambeni kalula.
Imali kanye Ukuzihoxisa – Izinkokhelo nokuvikeleka
Ayikho indlela ongabeka ngayo ukubheja ngaphandle kokufaka imali kuqala ku-akhawunti yakho oyibhukha online. Noma kunjalo, lokhu ngokuqondakalayo kuyinto eyenza abantu abaningi batatazele. Kungakho sibheka ngokucophelela zonke izindlela zokukhokha ezinikezwayo. Asigcini ngokubheka ukuthi bonke bayahlonishwa yini, ephephile, futhi uvikelekile, kodwa futhi sifuna ukubona ukuthi kukhona uhla lokuhlangabezana nezidingo zawo wonke umuntu. Amabhuku abhukhayo ahamba phambili azonikeza okungaphezulu kakhulu kokukhokhelwa kwamakhadi esikweletu nasebhange; kufanele futhi ukwazi ukusebenzisa uhla lwama-e-wallets, amakhadi akhokhelwa kusengaphambili, izinhlelo zokukhokha zeselula, ukudluliselwa kwebhange okusheshayo, ukudluliswa kwentambo, ngisho ne-cryptocurrensets.
Ngaphandle kwezindlela zokukhokha, siphinde sihlole izikhathi zokuthengiselana. Imali kufanele isheshe, okungenani ngezindlela eziningi zokukhokha, ngenkathi izicelo zokuhoxa kufanele zicutshungulwe ngokushesha ukuze ungashiywa ulinde ama-winnings akho. Ngaphezu kwalokho, sizobheka inqubomgomo yokuhoxa ukubona ukuthi ngabe kukhona yini imikhawulo ekhona, njenge-cap yenyanga, futhi uma kunjalo ngabe alungile futhi ahambisana namazinga embonini.
Noma ubheja ngebhuki ehamba phambili eku-inthanethi, ungahlangabezana nezinkinga ngezikhathi ezithile noma nje ube nombuzo odinga ukuphendulwa. Yingakho sibheka ngokucophelela ukusekelwa kwamakhasimende okunikezwa ngubhuki. Ngaphezu kokubheka izingxenye zosizo zamasayithi, ukuqinisekisa ukuthi zinemininingwane futhi imininingwane yethulwa ngendlela ecacile, sizobheka izindlela okungathintwa ngazo ukwesekwa kwamakhasimende kanye namahora abo okusebenza. Sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi iqembu lokweseka amakhasimende liyashesha ukuphendula, ukuthi kuhloniphekile, nokuthi inikeza izeluleko ezicacile neziwusizo.
Ngemuva kokubheka zonke lezi zinto ezingenhla, sizobe sesinikeza ubhuki isilinganiso sonke kanye nezincomo. Lokhu akusho ukuthi sibala bonke ababhuki esibahlolayo, njengoba singeke sincome noma yini enganele ngokwanele. Noma kunjalo, ngemuva kokuhlola konke okungenhla uma sicabanga ukuthi kufanelekile ukwamukelwa njengenye yezindawo zokubhuka ezihamba phambili, lapho-ke sizokubhalela isibuyekezo esigcwele ongasifunda. Zinike isikhathi sokufunda ezimbalwa zezibuyekezo zethu futhi siqinisekile ukuthi uzothola i-bookie yakho eku-inthanethi ephelele.
Umhlahlandlela Wama-Best Bookies ’Amabhonasi
Njengoba kushiwo, bonke ababhuki be-inthanethi bazonikeza amakhasimende amabhonasi. Kunamabhonasi amukelekile okusiza ukuheha amakhasimende amasha bese kuba khona amanye amabhonasi amaningi namaphromoshini asebenza njengezikhuthazo zokuqhubeka nokubuya. Noma kunjalo, siyazi ukuthi umhlaba wamabhonasi kabhuki angaba nokudideka ekuqaleni, ikakhulukazi maqondana nezimo zokubheja, ngakho-ke nansi inkomba emfushane yakho konke odinga ukukwazi.
Siyakwamukela Amabhonasi Wediphozithi
Ibhonasi ejwayelekile ozohlangana nayo ibhonasi yokubhalisa. I-bookie izonikela ngokufanisa idiphozi yakho yokuqala kuze kufike enanini elithile, ukuqinisekisa ukuthi unemali eningi ku-akhawunti yakho. Ngokwesibonelo, ungabona okuthile okufana ne-100% kuze kufike ku- $ 100, okusho ukuthi zizofanisa idiphozi yakho efinyelela ku- $ 100, okungukuthi. beka u- $ 100 bese une- $ 200 ku-akhawunti yakho. Kwesinye isikhathi la mabhonasi makhulu kakhulu, I-150% noma i-200%.
Uma i-bookie eku-inthanethi inganikeli ngebhonasi yokuqala yediphozi njengomnikelo wayo wokubhalisa, kungenzeka ikunikeze uhlobo oluthile lokubheja kwamahhala noma ukubheja okufanayo. Ngokwesibonelo, uma wenza ukubheja okungu- $ 5, lapho-ke bazokunika enye imali engu- $ 5 mahhala. Kwesinye isikhathi ukunikezwa kungaphana kakhulu futhi kukunikeze ukubheja okuphindwe kabili noma kathathu, noma ngisho nokubheja okuningi.
Ukubhejwa Kwezimali Ezingabuyiswa Nemali Nengozi
Ngeshwa, akuwona wonke amabhethri owabekayo azowina. Ukusiza nokukhokhela lokhu, amabhuki amaningi aku-inthanethi azokunikeza ukubuyiselwa kwemali ekubhejweni kwakho kokuqala noma ukubheja okuzongena esikhundleni uma kulahleka. Ngokwesibonelo, uma ulahlekelwa ukubheja okungu- $ 10 eqenjini ukuze uwine, lapho-ke uzoba nethuba lokubeka okunye ukubheja okungu- $ 10 kohlobo olufanayo.
Amabhuku amaningi e-inthanethi ahlinzeka ngohlobo oluthile lokukhushulwa okungavumelani nezimo. Lokhu kungahle kube lula njengokunikeza izingqinamba eziphana kakhulu kumdlalo othile noma umcimbi othile, noma kungahle kube yinkimbinkimbi ngokwengeziwe futhi kubandakanye izingqinamba ezithuthukisiwe ekubhejeni kwe-accumulator (lapho uhlanganisa ukubheja okuningi). Imvamisa, lezi zitholakala njalo ngesonto, ikakhulukazi kumaligi amakhulu ezemidlalo.
Kuchazwa Imigomo Nemibandela Yebhonasi
Yonke ibhonasi oyinikezwayo izofika nemigomo nemibandela enamathiselwe. Kubalulekile ukuthi ukuqonde lokhu sengathi akuhlangatshezwana nakho, ibhuki lingaba nelungelo lokushaqa ibhonasi nanoma yikuphi ukuwina okuhambisanayo.
Isidingo sokubheja ukuthi udinga kangakanani ukugembula ngaphambi kokwenza ukuhoxiswa. Imvamisa ivezwa njengokuphindaphindwayo kwenani lebhonasi, ngokwesibonelo 5x. Lokhu kusho ukuthi uma ubungamukela ibhonasi engu- $ 50 enezidingo ezi-5x zokubheja, lapho-ke kuzofanele ubheje u- $ 250 ukuhlangabezana nezidingo.
Lokhu kuzwakala sengathi ubheje izizumbulu zemali ukuze uhlangabezane nezidingo zokubheja. Noma kunjalo, imvamisa uzokwazi ukusebenzisa noma yikuphi ukuwina okuvela kubhonasi ukuze uhlangabezane nezimfuneko. Ngakho-ke, uma ubeka ukubheja okuwinayo, ungamane usebenzise ama-winnings avela kubo ukubeka ukubheja okuningi futhi usebenzele ukuhlangabezana nezidingo.
Uzobona eminye imikhawulo. Ngokwesibonelo, imvamisa kuzoba nemibandela mayelana nobunzima ekubhejeni okufanelekile. Ngokwesibonelo, imigomo ingasho ukuthi izingqinamba kufanele zibe ngu-1.40 noma ngaphezulu. Ngamanye amazwi, uma ngabe ubeka ukubheja okunokuphikisana okungaphansi kwalokho, lapho-ke ukubheja ngeke kubalwe kuye ngezidingo zokubheja. Ngaphezu kwalokho, ingahle ikhawulelwe ezinhlotsheni ezithile zokubheja. Ngokwesibonelo, kungadingeka ukuthi usebenzise kuphela ukubheja kwe-accumulator ngenani eliphansi lemicimbi nobunzima obuncane.
Kunezinye izinto ezimbalwa okufanele wazi. Ngokujwayelekile, kuzofanele uhlangabezane nezidingo zokubheja ngaphakathi kwesikhathi esibekiwe. Kuzofanele futhi uqaphele amandla wokuhlukunyezwa ngamabhonasi, Ngokwesibonelo, ukudala ama-akhawunti amaningi ukufuna amabhonasi amaningi. Noma kunjalo, konke lokhu kuzochazwa ngokucacile emigomeni nemibandela yebhonasi, ngakho-ke qiniseka ukuthi uzinika isikhathi sokuzifunda ngaphambi kokwamukela ibhonasi.
Isango Lakho Lokuya Kokubhuka Okuhamba Phambili Kwe-inthanethi
Sisebenze kanzima ukuhlanganisa zonke izinsizakusebenza ongazidinga ukuthola ababhuki abahamba phambili. Isayithi lethu ligcwele imininingwane futhi silibuyekeza njalo. Uma ufuna indawo entsha yokubheja, bese uzinika isikhathi sokuhlola futhi siyaqiniseka ukuthi kungekudala uzosekela abadlali namaqembu akho owathandayo kubhuki obumnandi we-inthanethi.